Ukunyuka kwaye Ukhanye iKhabhinethi yeeNtabeni, iindawo eziphakamileyo zeNtlango - I-Airbnb
Ukunyuka kwaye Ukhanye iKhabhinethi yeeNtabeni, iindawo eziphakamileyo zeNtlango
Wilderness, Western Cape, eMzantsi Afrika
Indlu encinci sinombuki zindwendwe onguThandi
Ujikelezwe ngamatyholo efynbos kunye nesandi seentaka, uya kuba namava endalo awodwa kwaye uvuke kudederhu lweentaba ze-Outeniqua eziqaqambileyo phambi kwakho.
Siyinto elula, ngaphandle kwegridi emiselweyo ngoko ungalindeli ubunewunewu kodwa kunoko ubumnandi obulula kunye nendalo kulo lonke uzuko lwayo. Ipropati yethu ngumsebenzi oqhubekayo. Siphupha ngokudala indawo ezinzileyo ngokubuyisela umhlaba wethu kunye nokuhlonipha indalo kwinkqubo.
Indlu yethu yamaplanga ipholile kwaye inamagumbi aliqela ibe yakhiwe sithi ngothando lonke emhlabeni! Usebenzisa iingcango eziphindaphindeneyo kunye neefestile, kwaye zihonjiswe ngobuncwane obudala, le ndawo ibonisa ubuntu obuthile.
Indlu yamaplanga ingqongwe ziifynbos ibe iiOuteniqua Mountains eziqaqambileyo ziyindawo entle xa usebhedini.
Kukho i-deck encinci ngaphambili ukuze wonwabele indawo ejikelezileyo uze ubukele ukutshona kwelanga. Kukho ishawa ephandle enentaba engaphazamisekiyo kunye nentlambo kunye nendlu yangasese enomgquba onokuyisebenzisa.
Siyiprojekthi ekhusela indalo kwaye sisebenzisa inkqubo yelanga ukuze sisebenzise amandla. Oku kuthetha ukuba akukho zixhobo zombane ezisindayo ezinokusetyenziswa (ezinjengomatshini wokomisa iinwele), kodwa izibane, kunye nokutshaja iifowuni neethabhlethi kuhle gqitha. Kukho izibane ezisecaleni kwebhedi, ifeni ehlotyeni nakwindawo yokufaka izinto. Kungcono ukuhlawulisa izixhobo ngexesha lokutshona kwelanga losuku uze ubuze umbuki zindwendwe wakho ukuba ufuna inkcazelo engakumbi.
Ngoko ngamanye amaxesha sikwindalo kwaye ngamanye amaxesha sineendwendwe zezilwanyana ezifana neenkawu, iinkawu, i-bushbuck njl ngoko nceda ungashiyi ukutya kwi-deck xa uhamba okanye uphumile emini.
Kukho ikhitshi elilula, elinompheki wegesi encinci kunye nefriji encinci okanye i-freezer. Sinika iti, ikofu, i-coffee plunger, iimagi, izinto zokuhombisa ne-crockery kunye nembiza nepani.
SineWiFi kwindlu yamaplanga ukuba ufuna okanye unqwenela ukuyisebenzisa, iindwendwe zidla ngokusebenzela ekhaya kwaye unxibelelwano lunamandla.
Ukuba uza nomntwana sinokubonelela ngomatrasi waphantsi. Nceda uqaphele ukuba isitya asikhuselekanga.
Siyakukhuthaza ukuba uziphe ixesha lokonwabela indawo entle. Ungakwazi ukuya kwiMephu emangalisayo yaseAfrika (malunga nemizuzu eyi-20) okanye wonwabele ihlathi elihle okanye umlambo osuka endlwini.
Kukho nevenkile yekofu entle ecaleni kwendlela ebonisa ulwandle kakuhle.
Sinenye indawo yokuhlala ye-Airbnb eyadini, ngoko usenokubona ezinye iindwendwe egadini okanye epakini kodwa xa ukwindawo yamaplanga uyimfihlo ibe awunayo.
Sikhuthaza ukuba wonwabele indalo, wonwabele izandi zeentaka, isibhakabhaka sasebusuku esineenkwenkwezi, ivumba le-fynbos kwaye uyayixabisa imimangaliso kaMama Wendalo.
Indawo yokuhlala ifikeleleka lula ngemoto nangona kufuneka uqhube indlela emfutshane yokufika apho. Ubumelwane bethu buyamangalisa ngemephu yodumo yaseAfrika indawo yokujonga kunye nokutsiba kweparagliding kusezantsi kwendlela. Unokuthatha uhambo olufutshane ukuya kuyo. Apha unemibono engakholelekiyo yolwandle kunye nentlambo yeKaaimans kwaye ufumane umbono wokwenyani wale dolophu imangalisayo. Kukwakho nevenkile ethandekayo yekofu ngaphaya kwendlela, ungahamba apho, wonwabele isiselo kunye nemibono emangalisayo yolwandle.
Ilali yasentlango, iindawo zokutyela kunye nolwandle oluphefumlayo luyimizuzu emi-5 ngemoto. Ukuba unqwenela ukuthenga izinto ezisisiseko kukho ivenkile encinci imizuzu emi-2 ngemoto.
Indawo yethu ikwimida yehlathi elimangalisayo lemveli, sabelana ngekhaya lethu kunye negadi kunye nendalo, ezinye zeendwendwe zethu esizithandayo ziquka i-Eagle owl, bush buck, igennet, iKnysna Loerie kunye neentaka ezininzi zelanga. Ukutya kuye nawuphi na umthandi weentaka.
Sinikezela ngeendlela zokuhamba ezikhokelwayo ukuhla ukuya kumlambo iKaaimans ukusuka kwipropathi edlula amahlathi amakhulu emveli athatha imizuzu engama-35 ukuya nokubuya. Buza nomninimzi wakho.
Umbuki zindwendwe ngu- Thandi
Mna nogxa wam sihlala kulepropathi so sizakufumaneka xa usifuna. Ukuba asikho ekhaya inombolo yoqhagamshelwano iya kunikwa.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Wilderness